In la eego in ay ka qabashada hawlaha nololmaalmeedka, line amarka noqon kartaa in ay xoog badan iyo sidoo kale waxyeelada leh. Tusaale ahaan, amarka fuliyaan shirkad ay awood kuu siinayaa in ay tirtiraan ama tirtirto files. Amarka rmdir wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah u tusaha iyo fayl.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ka taxaddartaa, maxaa yeelay duwan marka aad files ka Finder ku wareejiyo qashinka, suurta gal ma aha in ay iyaga soo ceshano haddii aad ka faa'iidaysan amarradan. Sidaas oo ay tahayna, haddii aad dooni u leh adeegsiga awoodaha Terminal ee, faylka Lauch delete ka mid yahay amarka oo aan aad iska indho tiri karno.
Waxaa jira siyaabo in ay ka mid illaalin ah si loo hubiyo in files kaliya aad masixi runta ah waa kuwa aad dooneyso in aad tirtirto.
Faa'iidooyinka tirtiro Files Isticmaalka Line ku amartaa
Waxaa la ma adag tahay in ay tirtirto files isticmaalaya Finder iyo aad had iyo jeer ay awoodaan in ay dib u soo ceshano files ka qashinka haddii aad leedahay bedelitaanka maanka. Haddaba maxaad qaadan dhib ah ee la isticmaalayo line amarka?
Hoos waxaa ku qoran dhowr sababood:
By samaynta isticmaalka wildcards, waxa aad awoodi kartaa in ay masixi files badan bay soomaan oo wax ku ool ah.
Waxaad awoodaa inaad dib u soo ceshano files ka Trash marka aad soo gaarto khaladaad aan dhaqaaqayn.
Waxaa suurto gal ah si aad u masixi files kuwaas oo qarinaayay in Finder ah; kuwani waa files oo laga yaabo in goobaha u Chine gaar ah ama qaybaha OS X, taas oo ka kooban dhibic (.) hore ee magacyadooda, taas oo aan la soo bandhigay by Finder.
Haddii ay dhacdo in aad Mac waa khaldan oo aadan haysan inay helaan Finder mar dambe, ee aad ka faa'iidaysan karaan line amarka u dhib arrinta.
Tirtirto faylashada iyo fayl Isticmaalka degdeg ah Command on Windows
Ma la socotaa waxaa suurtagal ah in masixi file a in Windows adeegsanaya mid ah amar Xusuusi? Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah tallaabooyinka ku saabsan sida loo tago oo ku saabsan:
1. Ka bilow ka Start, ka dibna sii soco ilaa All Programs, Accessories oo ugu dambeyntii ku amartaa degdeg ah. Waxaad sidoo kale u heli karaa wada hadal u orod (WinKey iyo R) oo muhiim ah 'Lauch "laakiin ma lagasoo ah.
2. Key in 'del' laakiin saarto xigashooyin ah.
3. Ku qor magaca faylka iyo kordhinta. Haddii aad hadda ee buugga taas oo ka kooban faylka, aad diyaar u tahay in la sii wado. Aad Xaaladdan oo aanay ka warqabin waxa file dheeraad ah waa, muhiimka ah ee faylka gudaha nooc ka mid ah sanduuqa raadinta (tani waxaa ay go'aamiyeen kombiyuutarka aad leedahay iyo nooca raadinta aad heli karto). Riix oo Midigta iyo heli guryaha oo jooga bogga muhiim ah u noqon doonaa. Waxaa la mid ah sida ay noqon doontaa 'C:. /myfilename.ext'
Haddii ay dhacdo in aadan ku jirin buugga ku haboon, waxaad ku qor karaa 'cd' tusmada ama muhiimka ah ee file Jidka dhamaystiran oo laga tirtirayaa.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad masixi 'file.txt' aad u baahan tahay in ay muhiim ah 'del file.txt.' Haddii file ku yaalo on desktop-ka, ee muhiimka ah ee 'C: /Users/username/Desktop\_file.txt' waa hadii aad ka mid ah buugga on top.
4. DEL waxay bixisaa taageero ah ee characters wildcards sidoo kale, sida calaamad (*). Tusaale ahaan, haddii aad doonaysaan inaad tirtirto file kasta oo aad desktop taas oo uu leeyahay .wav kordhiyo, waa in aad ku qor 'del C:. \_ Users / username / Desktop / * regelingen.' Takhalusid
Takhalusid files / fayl la isticmaalayo line amarka on Mac
Tirtiro fayl ama tusaha kala duwan xoogaa. Haddii aad isku daydo inaad ku shaqeeyaan gal ah amarka fuliyaan shirkad ah, fariin hoose ka muuqan doontaa:
Macquul ma aha in aad u masixi tusaha isticmaalka amarka fuliyaan shirkad ah. rmdir waa amarkii gaar ah loo isticmaalo si ay u tirtirto tusaha. Sidaa darteed, si ay u masixi agaasimaha la yiraahdo Archives, ku shaqeeyaan amarka hoos ku qoran:
Takhalusid Directory ah iyo sidoo kale Files waxa ku jira
• amarka fuliyaan shirkad wuxuu bixiyaa doorasho xoog (-R ama -r) sidoo kale loo yaqaan ikhtiyaarka recursive. Ka dib markii socda amarka fuliyaan shirkad-R on tusaha, waxa aad si toos ah Terminal u masixi galkan, wax kasta oo files waxa ay leedahay ama fayl-hoosaadka iyo wax fayl ama faylasha gudaha-fayl sub, oo dhan.
• Tusaale ahaan, haddii aad u hantidaan tusaha ka buuxaan archives taas oo uu leeyahay files ama buugga, tirtiro wax kasta oo midba mid ka line amarka ama Finder laga yaabaa baabbi'iyee muddo dheer. Sidaa darteed, si fudud ku shaqeeyaan amarka sida soo socota:
1. fuliyaan shirkad-R Archives
2. Maskaxda ku hay in ay tani tahay go'aan rasmi ah. Si kastaba ha ahaatee in aad, ka dhigi kara isticmaalka -flag ee ammaanka.
3. fuliyaan shirkad-ir Archives
4. Tani waxa aad codsan doonaa si loo xaqiijiyo tirtirka ee shay kasta.
Talooyin iyo tabaha loo isticmaalo tirtirto Lauch file
Haddii ay dhacdo in aadan awoodin in aad soo faaruqiso Mac ee qashinka, fuliyaan shirkad ah - R amarka waa mid waxtar leh. File A la xiraa karaa ama waxaa laga yaabaa in aan laguu ogolaan inaad masixi mid ama ka badan files. Tani waxay noqon kartaa diiqayo; Si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa isticmaalka line amarka si aad u hesho xal fudud.
1. Nooca sida ku cad hoose ee Terminal
• fuliyaan shirkad-R
• Nooca meel
• Qashinka Open ee Finder iyo jiidi alaabta gudaha si Terminal Window. Waxaad ka arki doona mid ama ka badan files leh waddooyinkiisa sida /Users/.Trash/file.txt.
• Haddii ay dhacdo in qoysas fara badan ay joogaan, waxaad ogaan laga yaabaa in liiskan oo ay soo baxa waa dhan on a line dheer hal, dabooli Window Terminal ah. Haddii aad tahay mid aad u gaar ah aad dooneyso in aad tirtirto kasta oo ka mid ah kuwaa, guji noqo. Qashinka la madhin doonaa Terminal.
2. dir Output ka mid ah amar ah in sabuurad ah
Waxaad si fudud toos ah wax soo saarka ah ugu diri doona sabuurad ah.
Laga soo gal ah, furo degdeg ah amarka
Waxaad u isku dayay in la furo si degdeg ah amarka iyo kala kulantay badan oo amarradayda cd isku dayaya in ay helaan gal ah. Warka wanaagsani waa in aad ku badbaadin karto waqti badan iyadoo la isticmaalayo Explorer si uu u furo si degdeg ah a amarka gudaha gal ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya in la qabto wareeg, guji xaq ku gal ah oo menu macnaha soo bandhigi doonaa ikhtiyaarka ah.
Waxaa hubaal ah, waxaa laga yaabaa inaad ku jirtay siyoodba furaha ilaa si ay u helaan amarrada hore aad; tani waxay noqon kartaa daal haddii aad isku dayayaan in ay hesho amarka gaar ah. Hab kale oo aad isticmaali karto si aad u aragto amarkii hore la isticmaalayo amarka doskey ah.
Doskey / taariikh
Sida loo joogto ah Ladnaansho tirtiray Files
> Resource > Ladnaansho > Guide Ultimate The in tirto faylasha Isticmaalka Command oo dhakhso ah iyo Command Line